Wp/blk/အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ
အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏယို ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ အဝ်ႏဟဲ့ꩻရောင် အိဉ်ႏကလေက်နေး United States, the U.S., the U.S.A., the States, the America စတဲင်နုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏ အဝ်ႏဟဲ့ꩻသုင်ꩻရောင်လဲ့ ဖြွမ်းဗူႏပုင်ႏဥပဒေႏအလꩻ တောမ်ႏခမ်းနယ်ႏ အဖြုံႏ(၅၀)တောမ်ႏ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏတဖြုံႏ ကပါဒါႏ ထွာဒျာႏ ဖြယ်ဒရယ်ဒီမိုကရဲက်တစ်ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ တဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။ အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ အမေႏရိကတွိုက်ထင်ꩻ အခဝ်ထာႏဝကိုတဲင် ပစိဖိတ် တောမ်ႏ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာႏခါႏ နဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆွိုင်ꩻသွုပ်ဆွိုက်ချာငါဒါႏ ခမ်းနယ်ႏ(၄၈)ဖြုံႏတောမ်ႏ အိုပ်ချုတ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻဝေင်ꩻတန် Wp/blk/ဝါဆဉ်တန်ဒီသီလဲ့ အဝ်ႏသော့ꩻတဲင် ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနဝ်ꩻ Wp/blk/ကနေဒါခမ်းထီ၊ ဖဲ့ꩻနဝ်နဝ်ꩻ Wp/blk/မဲက်သီကိုခမ်းထီ အဝ်ႏခူရောင်နဝ်ꩻသွူ။အလဲက်စကာခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ တွိုက်တန်အခဝ်ဖဲ့ꩻတွို့ꩻထင်ꩻ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနဝ်ꩻ ကနေဒါခမ်း တောမ်ႏ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်ꩻ ကာႏသွူ ဗဲရိဉ်းထီစူခါႏ(Bering Strait)တဲင် Wp/blk/ရသျားခမ်းထီဖုံႏ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏကုဲင် ဟာဝုဲင်အီခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာႏအကဲဉ်ကို ထွာဒျာႏ ကွန်ဗူႏနဝ်ꩻသွူ။ အမေႏရိကန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏပဲင်ႏဆဲင်ႏပါ ကာရစ်ဘီယန် တောမ်ႏ ပစိဖိတ်ဒေႏသထျꩻ ဟံႏနယ်ႏဖုံႏတောမ်ႏ ကွန်ဖုံႏနေနေသွူ။
ဆောင်ႏအွံ: In God We Trust
ခမ်းထီငဝ်းသꩻချင်ꩻ: The Star-Spangled Banner
ဖြယ်ဒရယ်စနိစ်အလꩻ အွဉ်ႏထွော့ခါꩻနေးတဝ်း သုင်ꩻချာဒေႏသခံႏခမ်းနယ်ႏသားငဝ်းငွါဖုံႏ
ခရိယာန်ႏ (၇၈.၅%)၊ ဘာႏသာႏအဝ်ႏတဝ်း (၁၂.၁%)၊ အလင် (၂.၅%)၊ ရဟူဒီ (၁.၇%)၊ ဗုဒ္ဓ (၀.၇%)၊ အိစ်သာလမ် (၀.၆%)
ဇူလုဲင် ၄ နီꩻ၊ ၁၇၇၆ ဗာႏ
သဲက်တဉ်ဗာ ၃ နီꩻ၊ ၁၇၈၃ ဗာႏ
ဇွန် ၂၁ နီꩻ၊ ၁၇၈၈ ဗာႏ
၉,၈၃၃,၅၂၀ km2 (၃,၇၉၆,၇၄၀ sq mi) (အရန်း: ၃/၄)
၃၃၁,၄၄၉,၂၈၁ (၂၀၂၀) (အရန်း - ၃)
၃၃.၆/km2 (၈၇.၀/sq mi)
$၁၅.၀၉၄ ထရီလီယံ (အရန်း - ၁)
$၄၈,၃၈၆ (အရန်း - ၈)
ထိုမွေး · ၄
အမေႏရိကန်ႏဒေါ်လာ (USD "$")
UTC -5 - -10
အမေႏရိကန်ႏခမ်း ဟံႏနယ်ႏအအဲဉ်ႏအလုဲင်း ဧရိယာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏစတုရန်းမဲင်ႏပေါင်ꩻ (၃.၇၉ သန်း)မဲင်ႏ (စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉.၈၃ သန်း ကီလိုမီတာ) တဲင် ကမ္ဘာႏလောင်း ဟံႏနယ်ႏအလုဲင်ႏသွတ်ꩻခမ်းကို ထွာစတုတ္တအတန်သွတ်ꩻသွူ။ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏအဖြာꩻ သန်း(၃၀၀)လွိုရပ်တဲင် ကမ္ဘာႏလောင်း ထွာလိုꩻအအာသွတ်ꩻကို အဝ်ႏတတိယရန်းသွူ။ အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏယိုနဝ်ꩻ လိုꩻအဝ်ႏရပ်လင်ခမ်းလင်သားဖုံႏ နွို့ထိုꩻလွဉ်အုံအာတဲင် ခမ်းကိုနဝ်ꩻ လိုꩻမျိုꩻလဲ့စွုမ်ႏ၊ ယေန်ႏငဲးရေꩻလဲ့ အဝ်ႏစွုမ်ႏ အဝ်ႏရော်ꩻအာမွေးနဝ်ꩻသွူ။ အမေႏရိကန်ႏ စီꩻပွာꩻရေꩻနဝ်ꩻ ကမ္ဘာႏလောင်း ထွာအတန်သွတ်ꩻတဲင် ခမ်းကိုထေနွောင်ꩻကွန်ႏခြွဉ်း(GDP)တန်ႏဖိုꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏအမေႏရိကန် ဒေါ်လာ ၁၄.၃ ထရီလီယံရပ်သွူ။
နပ်တွက်လွိုင်ႏအာစီꩻပွာꩻရေꩻ (Economic indicators)
ထာꩻမာꩻအဝ်ႏတဝ်းသား ၈.၂% (မတ်လာ ၂၀၁၂) 
GDP ထင်ႏထိုမုꩻ ၂.၈% (4Q 2011)၊ ၁.၇% (၂၀၁၁) 
သုင်ꩻစုဲင်ႏသားသီး ကွန်ႏဆေꩻနုံꩻ ရွဉ်တောင်ꩻသိုႏလီမုꩻ ၂.၇% (မတ်လာ ၂၀၁၁ – မတ်လာ ၂၀၁၂) 
လိုꩻကေန်ꩻခြေားသား ၁၅.၁% (၂၀၁၀) 
ပွိုးတောမ်ႏခမ်းသားလိုꩻအာ နီး $၁၅.၆၂ ထရီလီယံ (ဧပီလာ ၁၃၊ ၂၀၁၂) 
လမ်းသားခြွဉ်းတလမ်း ပဲင်ႏဆဲင်ႏမုꩻ $၅၈.၅ ထရီလီယံ (4Q ၂၀၁၁) 
↑ 2020 Census Illuminates Racial and Ethnic Composition of the Country။ United States Census။
↑ Race and Ethnicity in the United States: 2010 Census and 2020 Census။ United States Census။
↑ A Breakdown of 2020 Census Demographic Data (August 13, 2021)။
↑ Areas of the 50 states and the District of Columbia but not Puerto Rico nor other island territories per State Area Measurements and Internal Point Coordinates။ Census.gov (August 2010)။ “reflect base feature updates made in the MAF/TIGER database through August, 2010.”
↑ Surface water and surface water change။ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2015)။
↑ Employment Situation Summary။ U.S. Dept. of Labor (2012-04-06)။ 2012-04-17 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Gross Domestic Product, 4th Quarter 2011 and Annual 2011 (Advance Estimate)။ Bureau of Economic Analysis (2012-01-27)။ 2012-02-03 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။ Change is based on chained 2005 dollars. Quarterly growth is expressed as an annualized rate.
↑ Consumer Price Index: March 2012။ Bureau of Labor Statistics (2012-04-13)။ 2012-04-17 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010။ U.S. Census Bureau (2010-09-14)။ 2011-09-16 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Debt Statistics။ U.S. Dept. of the Treasury။ 18 April 2011 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 2012-04-17 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Flow of Funds Accounts of the United States: Flows and Outstandings Fourth Quarter 2011။ U.S. Federal Reserve (2012-03-08)။ 2012-04-17 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/အမေႏရိကန်ႏခမ်းခြွဉ်းဗူႏ&oldid=5420570"
This page was last edited on 1 May 2022, at 12:24.